Ukudalulwa Kwembonakalo - Izakhiwo Nezindlu ze-NJ & NY, i-Selectate, Defence Defence ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Ukuvikelwa Kwembeswa
Sebenzisa a Ummeli Wokuvikelwa Kwemboni ukuvikela amalungelo akho.
Uma ufuna ukugwema ukubekwa phambili noma ukuthola ukuguqulwa kwemali mboleko, kufanele uthintane noMmeli Wezokuvikela Okuso manje ukuze uxoxe ngazo zonke izindlela zokonga ikhaya lakho. Zonke izinyathelo ozithathayo namuhla zingakusindisa isikhathi esithe xaxa ngokuzayo. Ukuqasha Ummeli owazi umthetho ongaphambili kusinyathelo sokuqala sokugcina ikhaya lakho.
Ngabe uMmeli Wokubikezela angakwenzelani?
Ifayela lesaziso sokubukeka (i-NOA)
Uma uqasha i NJ Umphathi Wezokuvikela Ummeli noma i I-NY Foreclosed Defense Attorney, bazofaka a Isaziso sokubukeka (NOA) egameni lakho kanye nenkantolo futhi unikeze lesi saziso kummeli webhange lakho. Ngale ndlela ummeli wakho uzoqinisekisa ukuthi wonke umuntu obandakanyeka kuleli cala uzokwazi ukuthi umelwe. Kubuye kuvume nommeli ukuthi akwazi ukulandelela konke okufakwe enkantolo. Kuzo zombili i-NJ ne-NY wonke amacala okuvezwa manje afakwe i-imeyili. Ngakho-ke, ngemuva kokuthi i-NOA ifakiwe ummeli wakho uzothola isaziso nge-imeyili lapho noma yini ifakwa enkantolo enkantolo lapho nje ifakiwe.
Izimpendulo Zempendulo nesikhalazo noma Noma Lungisa Impendulo Yakho
Ngemuva kokuthi uthole amasamanisi okuqala kanye nesikhalazo, usemugqeni wesikhathi wokuphendula. Ummeli wakho ophambi kwesikhathi uzokwenzela lokhu. Uma usuvele uphendulile, ummeli wakho angahle adinge ukuchibiyela impendulo yakho ukuze aqinisekise ukuthi usebenzisa zonke iziphikiso zakho, noma kungenzeka ahumushe impendulo yakho kube semalese ngakho inkantolo yemukela ukufayila esikhundleni sokukushaya indiva.
Ngale ndlela uqala ngokusemthethweni ukulwa nengalo yomthetho.
Kubukeka Engqungqutheleni Yokuhlala
Izizwe ezifana New York babe saziso izingqungquthela zokuhlala lapho umnikazi wendlu ehlala khona empeleni esakhiweni esiveziwe. Uma ummeli webhange engakhombisi ukulungele ukuxoxisana engqungqutheleni yokuxazululwa kwemali, inkantolo ingalichitha leli cala ngokuphoqa leli bhange ukuthi liqale inqubo yokubulala. Unompempe oqokwe yinkantolo uzozama ukwenza ukuthi bobabili abathintekayo bavele esinqumeni esingapheli ekubonakalweni okusobala noma umnikazi alahle impahla. Ummeli wakho wezokuvikela ongaziwa uzokuhambela le mihlangano ukuze afezekise amalungelo akho futhi athathe isinqumo sokuchitha lelo cala uma ummeli webhange engaxoxanga ngokwethembeka.
Sebenzisa Umthetho Wokubikezela Nezindlela Zokuvikela Ukuvikela ikhaya lakho
Noma ucabanga ukuthi une-slam dunk defense, ayisebenzi ngaso sonke isikhathi, yingakho singena ngamasu amaningi ahlonishwe kusukela eminyakeni yesipiliyoni. Asesabi ukudlulisa isinqumo sejaji uma unelungelo. Sizosebenzisa yonke imithetho esingayenza ukuvikela utshalomali lwakho.
Kwesinye isikhathi okufunayo njeukushintsha iMalimboleko yakho.
Sizosebenza nawe ngenkathi sivikela ikhaya lakho ukufaka isicelo sokulungiswa kwemalimboleko. Kungenzeka ukuthi wenqatshwa esikhathini esidlule, kepha uma uke washintsha izimo ungazama ukuguqulwa kwemalimboleko futhi. Kwesinye isikhathi abantu bayaphoqelelwa esahlukweni i-13 ukuqothuka ukusebenza ngokuguqulwa kwemalimboleko. Siphatha lezi zimo ngaso sonke isikhathi. Sisebenza nawe ukuthola imiphumela oyifisayo.